Fiarahana tsy nisoratra anarana miaraka amin'ny finday ny sary maimaim-poana ny Indostria
Fiarahana tsy nisoratra anarana miaraka amin’ny finday ny sary maimaim-poana ny Indostria
HI REHETRA MITADY TOVOVAVY HO an’ny FIFANDRAISANA MATOTRA aho, TSY MISOTRO, TSY MIFOKA sigara ny ASA MIAINA miaraka AMIN’NY RENIKO ZANEMAYUS baolina KITRA hi ankizivavy mahafatifaty aho mitady tovovavy ho an’ny fianakaviana sy ny fanabeazana ny ankizy dia vonona ny hifindra any ianao ka ho velona amin’ny tsy misotro, tsy mifoka sigara miasa mafy dia miasa tsara ary koa milalao baolina kitra aho mpilalao baolina kitra. Hi rehetra mitady tovovavy ho an’ny fifandraisana matotra aho telo-polo taona aho tsy hisotro tsy mifoka sigara manao fanatanjahan-tena baolina kitra. Antso zazavavy tsy zokiko ahy Hihaona amin’ny eto sy ankehitriny dia tsy misy fisoratana anarana sy ho maimaim-poana momba ny ‘Antsasa’ ny Indostria finday sy ny sary mahafinaritra.
Izany, ary koa ny finday ny mpikambana ao amin ‘ ny toerana dia hanampy Anao ao amin’ny fohy indrindra azo atao ny fotoana mba hahitana namana vaovao. Antsasaky ny tsara indrindra Mampiaraka toerana miaraka amin’ny sary sy ny telefaonina isa izay afaka peruse maimaim-poana sy tsy misy fisoratana anarana amin’izao fotoana izao.
Te-hihaona ny ankizivavy na ny ankizilahy ao amin’ny Orinasa sy ny amin’ny chat online, jereo ny sary sy ho afaka hiantso azy ireo eo amin’ny finday
Avy eo dia mampiasa ny endri-javatra ao an-toerana ny Antsasaky ny zato, hisoratra anarana ary hahazo maimaim-poana ny fidirana amin’ny rehetra ny tolotra ao amin’ny vohikala, izay isan-andro misy vaovao ny fihaonana eo amin’ny mpandray anjara manerana izao tontolo izao. Amin’izao fotoana izao amin’ny fanompoana ‘ny fanehoana fiaraha-miory’ afaka misafidy sary ny vavy sy lahy, hitsena azy, na dia hiantso azy ireo amin’ny alalan’ny finday maro.
Miaraha aminay amin’izao fotoana izao
← "Ny bokin' ny Firaisana ara-nofo" — ny lehibe indrindra Mampiaraka toerana ho an'ny firaisana ara-nofo. Maimaim-poana tsy misy fisoratana anarana sy ny SMS
Ny antony hoe nahoana ianao no tsy tokony daty italiana Lehilahy →